Ntuziaka Michelin ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > Ntuziaka Michelin ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma
Ntuziaka Michelin ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha mma
Zụlite njem Britain, Ụgbọ oloko njem Holland, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Njem Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 18/03/2022)
The Best European restaurant Michelin ndu-enye oké mmalite na-eme atụmatụ a ụgbọ okporo ígwè eme njem gburugburu Europe. The Michelin ndu ugbu a na-enye European njem a nhọrọ nke ụlọ oriri na ọ hotelsụ andụ na họtel na 38 European obodo. Atọ ọhụrụ n'obodo e kwukwara na a 2019 mbipụta: Zagreb na Dubrovnik, Croatia, na Reykjavik, Iceland. Amaonye zụrụ nlekọta ileta na họrọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ mgbe n'itinye na-eme ememe Michelin nri kpakpando ndị na-fim usoro na-eji a yiri usoro maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Nsonazụ ahụ: a nso nke na-atụ aro iche niile masịrị ya na Amawaputala.
Njem nwere ike inwe obi ike ịdabere on Michelin eduzi mee ha ụgbọ okporo ígwè njem na ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ! Anyị na-na-narrowed ala Best European restaurant Michelin ndu, na N'ezie, hụ na nkwụsị ọ bụla dị mfe inweta site Train!
Best European restaurant Michelin Guide: Ịtali
Italy bụ ma ama n'ihi na ya ibu onyinye iji ụwa nke art, ije, ejiji, opera, akwụkwọ, imewe, na film - ndepụta na-aga, na na anyị na-adịghị ọbụna kwuru na onyinye na Best European restaurant idaha.
The nnukwu ozi ọma na 2019 bụ na Italy nwere ọhụrụ atọ kpakpando restaurant, Michelin kasị elu nsọpụrụ!
Uliassi, dị na Senigallia na Italy si Adriatic n'ụsọ oké osimiri, n’ikpeazụ nwere kpakpando atọ ọ na-achọ anya ya kemgbe ọ nọrọ ọtụtụ afọ na ọkwa kpakpando abụọ ahụ.
Dabere na blog ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ Fine na-eri nri Ndị hụrụ. -Agba ọsọ site nwaanyị na nwanne otu Catia na Mauro Uliassi, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ewepụta a arọ na-elekwasị anya Erimeri na awade ma akatabi okop menus na a la carte iri. Uliassi ugbu a, otu nke itoolu ndị ọzọ atọ kpakpando ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Italy. Nke a pụtara na ihe niile nke ikpeazụ afọ atọ-kpakpando ebe nọgidere na-enwe ha ọnọdụ, gụnyere ụlọ nri Modena a ma ama Osteria Francescana.
Rimini ka Senigallia Ụgbọ oloko
Rome ka Senigallia Ụgbọ oloko
Ụgbọ oloko na Ancona Senigallia
Florence na Senigallia Ụgbọ oloko
E nwere ugbu a 367 starred Best European restaurant Michelin, elu site na 356 afọ gara aga.
E nweghị ọhụrụ abụọ-kpakpando ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ndepụta nke afọ a. The ndu na-eme na-agụnye a whopping 29 ọhụrụ otu kpakpando ụlọ oriri na ọṅụṅụ si karịrị abụọ na iri na abuo Italian municipalities. Nke a na-eweta ngụkọta ka 318. n'ozuzu, ndu atụmatụ 367 starred ụlọ oriri na ọṅụṅụ, elu site na 356 afọ gara aga.
Kpọrọ "ndị Oscars nke nri ụlọ ọrụ" The ememme na Waterloo si BFI IMAX sinima bụ a isi maka chefs si gafee mba.
Afọ a, na Best European ụlọ oriri na ọṅụṅụ Great Britain nọgidere unaffected na ise ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-amụta ha jisiri idowe ha kpakpando. Cue rie ude nke enyemaka! The Araki, Restaurant Gordon Ramsay na Alain Ducasse na Dorchester bụ London iche jide na ha accolades, dị ka Heston Blumenthal si Abụba Duck na Alain Roux si Waterside Inn, ma na bere akwa.
E nwere ọtụtụ ụgbọ oloko na-aga London n'oge dị iche iche na Europe. isi Chekwaa mmiri ozuzo ịdebanye tiketi na nkeji iji lelee ahịhịa kacha mma!
The Michelin Guide 2019 full ndepụta
Mba netherland (ma ọ bụ Holland) bụ obere obodo juputara na akara ngosi ama ama n’uwa. Mara mma bọlbụ ubi, ákwà ifufe, cheese ahịa, osisi akpụkpọ ụkwụ, ọwa mmiri nke Amsterdam, masterpieces of Old Nna-ukwu, Delft Blue ụrọ, otutu mmiri-njikwa, na nde ịnyịnya ígwè. Na-ekele ịdị mma maka ịnyịnya ígwè. Nke 2019 MICHELIN Nduzi maka Netherlands nwere mkpokọta 571 ụlọ oriri na ọṅụṅụ na 263 ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Ị na-aga mkpa mgbatị.
Nke a afọ nhọrọ atụmatụ abụọ ọhụrụ abụọ starred ụlọ oriri na ọṅụṅụ na 12 iche na-anata otu kpakpando maka oge mbụ.
E nwere ugbu a 89 onye-starred ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ngụkọta. Na Derozario na Helmond, Jermain De Rozario ewepụta ya onwe atụ ogho na Indonesian nri. na edidem restaurant Tilburg, Paul Kappe araba diners na ya nke oge a nri di na ufiop flavors, dị nnọọ ka Jeroen Brouwer na na Loohoeve na Schoonloo na Thomas Van Santvoort na girl na Kerkdriel. Siri nke flavors bụkwa ihe e ji mara ndị nchepụta gbapụ site Jim na Mike Cornelissen na Rijnzicht na Doornenburg, na na ọ bụ nri nke efere awa na OONIVOO Uden. N'ihi na ndị hụrụ ezigbo nri okomoko gburugburu ebe, Bougainville na Amsterdam, na Voltaire na Leersum bụ zuru musts.
Brussels na Tilburg Ụgbọ oloko
Antwerp na Tilburg Ụgbọ oloko
Berlin na Tilburg Ụgbọ oloko
Paris na Tilburg Ụgbọ oloko
Ebe enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè
Amsterdam Central ọdụ bụ isi ụgbọ okporo ígwè na bụ ezigbo obi nke obodo: Central bụghị naanị site aha, kamakwa dị ka nnukwu ọha iga nyefe ebe, n'ihi ya, ọ ga-abụ ebe dị mma na enwetaghị a ụgbọ okporo ígwè oke.
Madrid bụ isi obodo nke Spain na kasị obodo ma Community of Madrid na Spain dị ka a dum.
Madrid bụ a omenala oriri. Ọ bụ obi otiti nke 1920s. Gara edemede greats dị ka Ernest Hemingway na Fitzgeralds, F Scott na Zelda, n'etiti ndị ọzọ.
Ọ nwere nri ahịa idaha ịhụ n'anya, ma Michelin Star ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-adịghị ka ndị na-atụ uche ma!
Tupu ị isi gị onye mbụ, anyị na-atụ aro na ị na na-amalite gị mgbede anya na cocktails si broody Museo Chicote mmanya. Ebe a bụ ebe otu n'ime Hemingway si haunts na ebe a ị na-ahụ ya mmasị ọṅụṅụ, na a ole na ole na iri na abuo ọzọ eleghị anya ị gbalịrị. Isi e n'oge n'ihu ìgwè mmadụ bulie.
Madrid nwere gburugburu 3,100 ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ma a họrọ ole na ole e ọdịda kpakpando ma ama Michelin Guide. Enwere 16 ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Madrid ọdịda na Michelin kpakpando: DiverXO (atọ kpakpando); Santceloni, La Terraza del cha cha, Sergi Arola, Ramon Freixa Madrid na El Club Allard (abụọ kpakpando); na Kabuki, Kabuki Wellington, DSTAgE, Albora, Ewu na Punto MX (otu kpakpando). Na mgbakwunye, na mpụga obodo, otu ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ (shei) nwere ihe abụọ kpakpando na e nwere atọ onye-kpakpando ụlọ oriri na ọṅụṅụ: Casa Jose, Chiron, na Montia. All nke ha na-eje ozi ụwa-klas nri na-enye ndị magburu onwe ọrụ.
Anyị n'elu Michelin kpakpando restaurant nhọrọ na Madrid obodo bụ DiverXO (3 fabulous kpakpando!)
The kere Siri nri David Muñoz nwere masịrị gourmets n'ụwa nile. coolness, obi ike, na okike bu isi ihe ga nke oma DiverXO. Nke a ụlọ oriri na ọṅụṅụ si menu agbanwe na oge, ma naanị nwere abụọ. The XOW Menu na Menu Glotón XOW. Ma menus na-enye otu nri na naanị ịdị iche na oke na ọnụahịa.
inweta E: The ụzọ kasị mma na-esi na a ghota nke Best European restaurant bụ site Metro na mgbe na-apụ na Tetuan Station (Ahịrị 1).
Chọrọ mara ụzọ kasị mma na-esi na nke ọ bụla n'ime ebe ndị a na Europe ụgbọ okporo ígwè? Chekwa ụgbọ oloko n'ezie! Gaba na n'elu ka anyị website chọta ndị kasị mma ahịa, na sekọnd!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-restaurant-michelin%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#michelin	#Michelinstar	#mba netherland	Nri	ejegharị	ejegharị	njem nlegharị anya	nje ndi njem	Njem
Njem ụgbọ oloko, Njem Europe
Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ oloko njem Holland, Ụgbọ okporo ígwè njem Hungary, Ụgbọ okporo ígwè njem Switzerland, Zụlite njem Netherlands, Njem Europe